आशिरमानको नयाँ फिल्म कुन ? – Fewa Times
आशिरमानको नयाँ फिल्म कुन ?
प्रकाशित मिति: August 29, 2019 10:07 pm
चलचित्र ‘ग्याङ्गस्टार ब्लुज’बाट डेब्यु गरेका नायक हुन्, आशिरमान देशराज जोशी । आशिरमान अभिनित पहिलो चलचित्रले बक्स अफिसमा खासै कमाल गर्न सकेन । उक्त चलचित्र असफलतासँगै आशिरमानलाई पहिलो गासमा नै ढुंगा पर्‍यो ।
यस चलचित्रपश्चात आशिरमानलाई चलचित्रको अफर भने धेरै आए । तर, आशिरमानले सबै नकारे । पछि ‘ग्याङ्गस्टार ब्लुज’ निर्देशक हेमराज विसीकै निर्देशनमा ‘द ब्रेकअप’मा काम गरे । गत फागुनमा रिलिज भएको उक्त चलचित्रले पनि आशिरमानलाई सफलता दिएन ।
डेब्यु चलचित्रपश्चात आशिरमानलाई सम्भावना बोकेको कलाकारको रुपमा हेरिएको थियो । आशिरमानको फ्यान फलोइङ पनि राम्रै थियो । तर, बिडम्बना उनको फ्यान फलोअर्स हलसम्म पुगिदिएनन् । उनको दुबै चलचित्र अफसल भए ।
लगतार दुबै चलचित्रबाट सफलता नपाएपछि अहिले आशिरमानले विश्राम लिएका छन् । उनले अहिले कुनै पनि चलचित्रमा काम गर्ने तयारी गरिरहेका छैनन् ।
यो भन्दै गर्दा आशिरमान माथि प्रश्न पनि उठिरहेको छ, ‘के आशिरमानले आफ्नै लागि ब्रेक लिएका हुन् त ? कि चलचित्र पाइरहेका छैनन् ?
तर, आशिरमान आफूलाई चलचित्रबाट अफर आइरहेको बताउँछन् । आशिरमान तत्काल चलचित्रमा काम गर्ने मनस्थितीमा नभएको दावी गर्छन् । उनी केही समय ब्रेक लिएर राम्रो काम गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
किन रोकियो शिव श्रेष्ठ ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ ?
इमेज अवार्ड सम्पन्न
नरेन र शिल्पा पोखरेल फिचर्ड ‘मकैको पिठो’
‘सन्तुर मिसेस नेपाल इन्टरनेसनल’मा भाविषा कोइरालाले जितिन् उपाधि